Shijiazhuang Yiling ဆေးရုံ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Yiling Group ကုမ္ပဏီ တဦးတည်းကတရုတ်နိုင်ငံတော်အဆင့် key ကိုမြင့်နည်းပညာအသစ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါမောက္ခဝူ Yiling, ပညာရှင်များ, 1992 ခုနှစ်တွင်ပါရဂူကျောင်းသားတစ်ဦးအထိန်းခြင်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ "Diagnosis နှင့် TCM ပေါင်ပစ္စည်းရောဂါ၏ Method ကိုကုသခြင်း" အဖြစ်ချီးကျူးထောပနာသော တရုတ်အမျိုးသား Intangible ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် , Yiling ကုမ္ပဏီအုပ်စုကရှေ့ပြေးအဖြစ်နည်းပညာယူပြီး, တွန်းအားစက်မှုမှ TCM ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုယူပြီး၏နိယာမကပ်လျက်, ထိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ဈေးကွက် နှင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, လက်တွေ့အလေ့အကျင့်, ထုတ်လုပ်မှု, စျေးကွက်နှင့်အတူတကွမဩဝါဒပေးပေါင်းစပ်အဖြစ် mode ကို "တစျခုထဲမှာငါး" စစ်ဆင်ရေးကိုတည်လေ၏။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, Yiling တရုတ်နိုင်ငံတွင် 29, ပညာရှင်များ, ကျွမ်းကျင်သူများပြန်လာသော, နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများ, ဆရာဝန်တွေ, သခင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပါအဝင်အခြားအထက်တန်းလွှာများရေးစပ်သောအားကြီးသောသုတေသနအဖွဲ့ရှိပါတယ်။
ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Yiling , တရုတ်ဆေးဝါးစာရင်းကုမ္ပဏီများမှ 50 (စတော့အိတ် Code ကို: 002603):, TCM, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ, ဆေးတောင့်, အပျော့ဆေးတောင့်, တက်ဘလက်, granules, အရည်ဆေးထိုးစသည်တို့များအတွက်ခေတ်သစ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းပိုင်ဆိုင်အပါအဝင်, ထုတ်ကုန်တစ်လေးနက်သုတေသနပြုထားသည် အနောက်ပိုင်းဖော်မြူလာနှင့် TCM ချပ်စသည်တို့ကို
အထူးသဖြင့်အကျိတ်အဘို့တချို့ကမူပိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) ကင်ဆာလူနာတွေအတွက်သိသာနှင့်ခိုင်ခံ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရာ Capsule ။ အောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်အတွက် Yiling Group ကုမ္ပဏီနှင့်ကာဒစ်ဖ်တက္ကသိုလ်ကတည်ထောင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနစင်တာ,4နှစ်ကြာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစင်တာကိုစျေးကွက်အရင်းအမြစ်များအကျိတ်သုတေသန, လက်တွေ့လျှောက်လွှာ & ခွဲဝေမှုဆန့်ကျင်တရုတ်ဆေးပညာနက်ရှိုင်းသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒါဟာထိထိရောက်ရောက်အာမခံရောဂါသီအိုရီ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာအကျိတ်အတွက်သက်တမ်းတိုးသွေးကြောတားစီး, အကျိတ် metastasis အမျိုးမျိုးတားစီးနိုင်သည်ကိုသက်သေပြသည့်တရုတ်ဆေးပညာ YangZhengXiaoJi Capsule အတွက်နက်ရှိုင်းမှုစနစ်သုတေသန, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ShenLingLan, anticancer မူးယစ်ဆေးဝါး၏အခြားမျိုး, ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ၏အဖိုးတန်ပစ္စည်း radiotherapy နှင့်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုမီနှင့်အပြီးနှစ်ဦးကိုသရက်ရွက်နှင့်ကျောက်ကပ်၏ချို့တဲ့ခြင်း, သွေးရှတာဇီနဲ့အဆိပ်အတောက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒါအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ပျင်းရိခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
သောက်ရေငတ်, polyorexia, ဆီး, ခန္ဓာကိုယ်တဖြည်းဖြည်းပါးလွှာ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ချွေး, Fanre, ချုပ်စသည်တို့ကို: အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါ Qi နှင့် yin ချို့တဲ့ရောဂါ, ရောဂါအတှကျအ JinLiDa granules,
Bazi ကျောက်ကပ်တောင့, ကျောက်ကပ် tonifying နှင့်ပူနွေးလာမှု yang tonifying ။ ခါးနှင့်ဒူးနာကျင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျောက်ကပ် yang ချို့တဲ့, မူးဝြေခင်းနှင့် tinnitus, Shenpi ပင်ပန်း, မေ့လျော့, အအေးမှခြင်းကိုမနှစ်သက်သက်ဆိုင်။
Jujuboside ရေနံဆေးတောင့်။ ဆေးတောင့်ပုံသဏ္ဍာန်သို့ဖန်ဆင်းတစ်ခုမှာကြင်နာကျန်းမာရေးအစားအစာ, Zizyphus ဆီး kernel ကိုရေနံအိပ်ပျော်ခြင်းအောင်းနေချိန်၏အချိန်ကိုအတိုကောက်နှင့်အချိန်နှင့်နှေးကွေးသောလှိုင်းအိပ်ပျော်ရာဒီဂရီတိုးမြှင့်, အမည်ရရေတိမ်ပိုင်းအိပ်စက်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အတော်များများကစာတမ်းများအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။
ယခုအသုံးပြုပုံ Yiling ထုတ်ကုန်ဒါအပေါ်တောင်ကိုရီးယား, ဗီယက်နမ်, အင်္ဂလန်, ကနေဒါ, နယ်သာလန်, စင်္ကာပူ, ရုရှားနှင့်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
Yiling ဆေးရုံ နဲ့အနားသတ်နေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ 20 နှစ်ကြာတရုတ်နိုင်ငံတွင် TCM အလုပ်လုပ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိဖြစ်သည့်ဆေးရုံပေါင်းစပ်တဲ့ခေတ်မီဘက်ပေါင်းစုံတရုတ်နှင့်အနောက်တိုင်းဆေးပညာဖြစ်လာသည်။
အမျိုးသားရေးအစဉ်အလာတရုတ်ဆေးပညာအုပ်ချုပ်ရေးအထူးကုအာရုံ, မော်တာအာရုံခံဆဲလျရောဂါမှဆက်ကပ်အပ်နှံသည့်ကြွက်သားကျုံ့ဆက်လက်ပညာရေးအခြေစိုက်စခန်း, myasthenia gravis, ကြွက်သားများအတွက်ကြွက်သားကျုံ့ - တရုတ်အမျိုးသားရေးအစဉ်အလာတရုတ်ဆေးပညာအုပ်ချုပ်ရေးအထူးကုအာရုံ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကြွက်သားကျုံ့လေ့လာမှုအသစ်များ၏ကုသမှု dystrophy ရောဂါနှင့်မျိုးစုံနဗ်ကြောများနှင့်အခြားအာရုံကြောရောဂါ။
ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ Hebei ပြည်နယ် key ကိုအထူးပြု, ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပကုသမှု၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ဒူထာဗေဒဦးစီးဌာန, နှင့်အားဖြင့် spondylitis ရောဂါ ankylosing, scleroderma, polymyositis, Sjogren syndrome ရောဂါ, Behcet ရဲ့ရောဂါ, ဒူလာ, အဆစ်ရောဂါကုသမှုတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာများပေါင်းစပ်။
ကင်ဆာဌာန (加链接) အတူတကွ TCM နှင့်အနောက်တိုင်းဆေးပညာပေါင်းစပ်အောင်မြင်စွာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကုသ။ ကင်ဆာလူနာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များအတွက်လူနာများ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် WBC တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အသကျရှငျအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အသက်တာရှည်အောင်ကူညီပေးဖို့, ကွဲပြားခြားနားသောကုသနည်းလမ်းများချမှတ်။ ရင်သားကင်ဆာ, အူမကြီးလမ်းကြောင်းကင်ဆာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, အဆုတ်ကင်ဆာ, အစာအိမ်ကင်ဆာနှင့်အခြားကင်ဆာကုသမှာအထူးသဖြင့်ကောင်းသော။
Yiling ကနျြးမာရေးစင်တာမှ : Yiling ကျန်းမာရေးမြို့ '' သောင်ပေါင်ပစ္စည်းကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ယဉ်ကျေးမှု '' နှင့်အတူလမ်းညွှန်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, ကျန်းမာရေးအိပ်စက်ခြင်း, ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အားလပ်ရက်-အသုံးစရိတ်, ကျန်းမာရေးစျေးဝယ်နှင့်စီးပွားရေး featured, ကနျြးမာရေးကိုထိနျးသိမျးစီမံကိန်းကိုအတွေ့အကြုံကို, ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကနျြးမာရေးကိုထိနျးသိမျးယဉ်ကျေးမှုအတှေ့အကွုံဖော်စပ်ထားပါတယ်အဖြစ် ပြပွဲနှင့်ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့တစ်နေရာတည်းမှာပလက်ဖောင်း။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးကျန်းမာရေးဆောင်ပုဒ်ဟိုတယ်, တရုတ်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အနောက်တိုင်းအစားအစာစားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်တစ်ဦးကငါးကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်, ကနျြးမာရေးစျေးဝယ်ကုန်တိုက်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။ အထဲတွင်အဆိုပါ core ကို function ကို, Yiling ကနျြးမာရေးရေးစင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများဆုံးအထူးအရာ, TCM အထူးကုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများတွင်လုပ်ကိုင်ကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်သူများကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Yiling ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲစင်တာတွင် သင် VIP ကုသမှုကိုခံစားနိုင်အောင်, ခေတ်မီကျန်းမာရေးစာမေးပွဲကြောင့်အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးများနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြော့ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုချက်ရှိပါတယ်။
ဝိသေသလက္ခဏာများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစီမံကိန်းများပါဝင်သည်: ကွန်ယက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးမှာ, ရွှေလင်းတခန္ဓာကိုယ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, သွေးကြောမြေတပြင်လုံးသည်အသွေးတန်ဆာကိုထောက်လှမ်း, သွေးထောက်လှမ်း, မျိုးဗီဇထောက်လှမ်း, ဆီးချိုအန္တရာယ်စိစစ်, TCM ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖော်ထုတ်ခြင်း၏ရေစက်များ၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုကစား။
Yiling နိုင်ငံတကာခရီးသွားအေဂျင်စီ, ဗီဇာဝန်ဆောင်မှု, အာမခံ conselltion, လက်မှတ်တွေ, ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်န်ဆောင်မှု, နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခြားခရီးသွားအေဂျင်စီဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းများပေးပါသည်။
လူနာတွေအတွက် : သင်, TCM & အနောက်တိုင်းဆေးပညာများနှင့်အစားအစာ, နေရာထိုင်ခင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, psychotherapy နှစ်ခုစလုံးပေါင်းစပ်ကုသမှုလာနှင့်ရနိုင်, ကျန်းမာရေးထိခိုက်အားလုံးရှုထောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
Sub-ကျန်းမာရေးလူများအတွက် : သင်အလုံအလောက်မယ့်ကျန်းမာသန်စွမ်း, မကျန်းမာဖြစ်ကြောင်း, သင်ကောင်းတစ်ဦးကြွင်းသောအရာလိုအပ်တယ်, သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်လျော်သောစညျးမဉျြးဥပ လာ. Yiling ကနျြးမာရေးစင်တာအသကျရှငျ, အကြှနျုပျတို့သညျကိုဂရုစိုက်ဖို့ TCM ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်ဆေးစစ်လိုအပ်သူတွေကိုများအတွက် : ဆေးပညာခရီးစဉ် လာ. ထိုရ, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်၏အသက်ကိုသင်၏ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏နျြးမာရေးအတှကျနှိုးဆော်သံကြိုတင်သတိပေးပါကရောဂါသို့ကြွလာတော်ရှေ့၌ Sub-ကျန်းမာရေးဆက်ဆံပါလိမ့်မည်။